UThule UMKHANKASO WOKUQWASHISA NGE CORONA EGLEBELANDS – Sivubela intuthuko Newspaper
UNXENXE umphakathi ukuba ubhekane nenselelo yokulwa negciwane lecorona oyimeya yeTheku ukhansela Mxolisi Kaunda. Lokhu ukusho ngenkathi ehambele indawo yaseMlazi EGlebelands Hostela lapho ebeqwashisa khona ngaleligciwane nathe linganqobeka uma kunokubambisana futhi abantu belandela imigomo ebekiwe.
UMeya Kaunda unxuse ukuba abantu bashintshe indlela yokuphila bajwayele inhlanzeko nokugeza izandla ngasosonke isikhathi ukugwema ukubhebhetheka kwaleligciwane. Indawo yaseMlazi, KwaMashu kanye neNanda ingezinye zezindawo ezibuthakathatha ekubhebhethekeni kalula kwaleligciwane ikakhulukazi njengoba sebebekhona ababikiwe ukuthi banalo kulezindawo.
UKaunda uphinde wanxusa ukuba abantu bazijwayeze ukuqhelelana futhi basebenzise ithuba abanikwa lona lokuthi bathole ukuhlolelwa lelligcinawe.
“Amakhansela iwona abandakanyeka kakhulu kuloluhlelo kanti futhi iwona azokwazisa abantu ezindaweni zawo uma sekumele abantu bahlolwe amahostela nasemijondolo nanokuthi bazofika nini alabo abazobahlola,” kusho uKaunda.
Uphinde wathi basebenzisana noMnyango weZempilo esifundazweni ukubheka izindawo namabhilidi lapho abantu abahlala emalokishini abasolakala ukuthi banaleligciwane bengagcinwa khona ukuze bangatheleli abanye. Ngenkathi uKaunda nethimba lakhe bevakashele kulelihostela unikele ngensipho, izibulali magcewane (sanitisers) waphinde wafaka amapheshana afundisa kabanzi ngaleligciwane.
Imeya ithi umasipala wenza konke okusemandleni ukulwisana naleligciwane ezindaweni ezifana nasemahostela, emijondolo kanye nakolindela. Abahlali basehostela bathi bayazama ukulandela imigomo ebekiwe uhulumeni. Okhulume neSivubela Intuthuko uthe inhlanzeko ezindaweni ezifana namahostela ithanda ukuba nzima njengoba kunabantu abaningi ndawonye kodwa kugconywana okwamanye njengoba abaningi begodukile baya emakhaya selokhu kwabekwa elikathaqa. “Kusekhona ke lokho okuncane njengokuthuthwa kukadoti okuthanda ukuthikameza kodwa abantu ababaningi kangako njengamanje nokwenza kube lula ukuqhelelana,” Kusho Nksz Nokubonga Shozi.
USOMABHIZINISI UKHIPHE UMASIPALA EHLAZWENI